Ifektha yokuLungisa ubuChwepheshe-abaThengi baseTshayina boLungiso lwabaThengi, abaThengisi
Metal strip back inkxaso
Inkxaso yangasemva kuyilo oluvulekileyo, kulula ukunxiba, isimahla simahla ukuze abantu abaninzi bayisebenzise. Inokuncamathisela iipads ezifudumeleyo. Ingubo yokhuseleko esemgangathweni ephezulu, ekhokelela kabini kumnqamlezo we-Y, ihhuku elinamandla kunye nelaphu, intambo yentsimbi ngaphakathi kwenkxaso yangasemva yenza umqolo wakho ngqo. Yimigangatho yoyilo ye-ergonomic enamaqhina eguqukayo wamagxa kunye nebhanti esinqeni ukuvumela ukwenziwa ngokwezifiso okukhulu.
Le mveliso isetyenziselwa ukuphucula imeko ye-hunchback okanye i-lumbar vertebra discomfort. Sebenzisa uhlobo lomnqamlezo olubophayo kunye nelaphu elinokuphefumla ngalo, kwaye lahlukile kolunye ubrawuza, lo wamkela uyilo oluhlanganisiweyo, esebenza ngalo lonke umva, umphumo ubonakala ngakumbi. Kwaye yenziwe ngokwe-ergonomic yomntu, ke le compact ilingana nomzimba.